Dagaal Askari lagu dilay oo ka dhacay duleedka Baydhabo
BAYDHABO, Soomaaliya - In ka badan 10 ayaa ku geeriyootay tiro intaas ka badan dhaawac ayaa kasoo gaarey ka gedaal markii dagaal culus uu ka dhacay degaanka Goof-gadud Burey, oo 30-dKM dhinaca Galbeed uga beegan magaalada Baydhabo.
Iska hor-imaadka ayaa yimid markii ay dagaalamayaal hubeysan oo ka tirsan xoogaga Al-Shabaab ay duulaan ku qaadeen Xero ay halkaasi ku leeyihiin cutubyo ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya.
Gudoomiyaha tuulada Goof-gadud Burey, Xasan Mayow Isaaq ayaa xaqiijiyay in kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ay saacado la wareegtay gacan ku haynta degaanka, balse, ay dib uga riiceen ciidamada xooga dalka.
Mayow ayaa shaaciyay in weerarka lagu dilay 7 kamid ah ciidamada dowladda, isaga oo intaas ku daray inuu jiro dhaawac, inkasta oo uu ka gaabsaday inuu bidhaamiyo tiradda ay Shabaab ka khaarijiyeen.
“Khasaaro labada dhinac ayaa jiro..Dhinaceena waa 7 dhimasho ah, iyo dhaawac…Balse, dhankooda ma hubno, laakiin jug culus ayaan ugeysanay,” ayuu yiri Gudoomiyaha uu uwaramay idaacadaha Muqdisho.
Ma jirto illaa iyo haatan wax war ah oo ay kooxda Al-Shabaab kasoo saaratay dhinaceeda howlgalkaan ay maanta fulisay.
Saldhiga la wareeray ayaa waxaa degan taliska qaybta 43aad ee guutada 60aad ee ciidamada xooga dalka Soomaaliya, kaasi oo dhowaan hogaan cusub oo umagacaabay Taliyaha guud ee milatariga dalka.
Weerarkaan lagu qaaday xeradda ayaa wuxuu kusoo aadaya iyadda oo lagu waddo inay ka dhacdo halkaasi munaasabad ay xilalka ku kala wareegaan hogaanka cusub iyo kii hore, si howsha halkeeda uga sii socoto.
Magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka socda kulamo iyo dhaq-dhaqaaqyo kala duwan.
Lafta Gareen oo joojiyay Kulan Xisbiga Xasan Sheekh ku qaban lahaa Baydhabo
Soomaliya 13.01.2019. 14:27
Qarax ka dhacay Baydhaba iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 25.12.2018. 14:40
Xildhibaan lagu dilay Baydhabo iyo dibadbaxyo rabshado wata oo socda
Soomaliya 14.12.2018. 12:08
Farmaajo oo sheegay inuu isbedelay xiriirkii DF iyo maamullada
Soomaliya 16.01.2019. 15:45
Doorashada ka dhacaysa Baydhabo iyo Bandow lagu soo rogay magaalada
Soomaliya 19.12.2018. 10:22